Whitening Teeth Tips Afaka Andramo Out ankehitriny! | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Maro ny olona manomboka mba ho zava-dehibe ny manana nify fotsy tahaka ny tanora. Mety mora foana izany nofy ho lasa zava-misy anefa, raha tianao izany ho. Afaka manana fotsy nify amin'ny alalan'ny fianarana ny teknika tsara indrindra avy any sy ny fanarahana toro-hevitra tsara. Ny fanazavana aseho eto no hilaza aminao ny whitest nify azo atao.
Alaviro sigara, kafe, ary ny divay. Tsirairay ireo dia mirakitra zavatra simika izay manaraka sy discolor ny nify. Raha toa ianao ka vonona ny hampihenana na manafoana ny fihinanana na ireo, dia tokony ho fanilihana ny nify mandimby anao haringako izy. Misy borosy izao Mini fanondrony misy izay afaka manome fahazavana Marokoroko sy ny nify faritra. Mety ho mora raisina hafa ny manana borosy nify aminao fotoana feno. Ny borosy ny fahombiazana no mahazo ny nify madio.
SOSO-KEVITRA! Drinks toy ny divay mena, kafe sy ny soda ho lany izay mitohy amin'ny rano iray vera. Misy zava-pisotro no tena haingana ny discolor nify, sy nisotro azy ireo tsy tapaka mety staining.
Ny zavatra voalohany tokony hatao Na izany na tsy Whitening ny nify fandaharana no hahazoana antoka fa azonao matihanina cleanings. Get ny nify matihanina nanadio isaky ny enim-bolana, ary hahatonga ny fotoana manaraka raha mbola ao ny birao noho ny amin'izao fotoana izao ny fanadiovana.
Mila ny ho malina tsara rehefa mihinana na misotro rehefa manana ny nify whitened. Nify dia ho mora kokoa ny hampietreny rehefa avy whitened. Miezaha intso- ny sakafo izay manana loko maizina manenjika anareo Aho mahafotsy ny nify. Kafe, ohatra, no ohatra tsara dia tsara ny mety hampietreny-miteraka zava-pisotro fa ny nify ho mora.
SOSO-KEVITRA! Mampiasa frezy ho toy ny voajanahary nify whitener. Ny voajanahary Kamban-teny hita ao amin'ny frezy dia mahafotsy ny nify tsy mampiasa zavatra simika.
Ny nifinao dia mety hampitombo anaty ny tsy fahazakana ny Whitening vokatra. Mety tsy handratra mandrakizay, nefa mbola mandratra betsaka. Aza mampiasa ny vokatra ka mandehana mahita ny mpitsabo nify raha vao araka izay azo atao. Afaka manoro karazana vokatra izay tsy ataony ny nify toy izany.
SOSO-KEVITRA! Vakio ny toro-lalana ny an-trano Whitening vokatra tanteraka alohan'ny manomboka fitsaboana. Ny fanaovana izany dia hahatonga ny ramy fotsiny izay harehitry, ny vavany mba ho tezitra, ary ny nify mba ho simba.
Voankazo dia voajanahary lehibe sy fomba mahafotsy nify whiteners. Roa ohatra ny voankazo faran'izay tsara izay afaka mahafotsy nify dia voasary sy ny voasary. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny voasary Peel manohitra ny ambonin'ny ny nify.
Miborosy nify freshens ny fofonaina ary mamono ny mikraoba izay mety gingivitis; na izany aza, karazana ny miborosy nify dia afaka discolor ny nify. Mampiasa ny miborosy nify fa tsy henjana, ary ho azo antoka fa tsy mazava loko.
SOSO-KEVITRA! Ny mahagaga fomba mahafotsy ny nify kely dia amin'ny alalan'ny fampiasana voajanahary frezy. Ny olona no nampiasa frezy ho toy ny an-trano nandritra ny taona maro whitener.
Tsy tapaka sy ny Whitening toothpaste toothpaste tsy maha samy hafa be. Aza lavo ny vokatra lafo vidy izay tsy miasa. Ianao dia ho tossing-bola fotsiny izy.
Afaka manao anao manokana Whitening toothpaste sasany peroxyde sy ny mofo soda. Avelao izany Mametaka mba tafiditra ny porous ambonin'ny ny nify dimy ny folo minitra alohan'ny fanilihana. Aza miborosy nify mafy, izany dia hisy tanana amin'ny mampahatezitra ny ramy.
SOSO-KEVITRA! Tandremo ary mampiasa nify Whitening vokatra mitovy tanteraka amin'izay nisy torolalana. Teeth Whitening vokatra mety hisy manimba tsikelikely na vokany ratsy eo amin'ny nify karazana verinia, ramy ary na dia hozatra.
Ny fomba iray hahazoana fotsy nify mbola fotsy dia ny hanorina nify tapaka cleanings.
Ny fomba mety mba hanazava ny tsikinao dia ny hanoloana ny amin'izao fotoana izao fotsiny toothpaste amin'ny Whitening toothpaste. Izany toothpaste dia namoaka mba hanesorana manokana sy ny takela-pahatsiarovana stains araka whitens. Nandritra ny fotoana maharitra ny fotoana, dia ho hitanao fotsy nify, ary mihena stains.
SOSO-KEVITRA! Tsarovy fa ny satro-boninahitra dia hafa noho ny fananana ara-boajanahary nify, ary aza mamaly ny nify whiteners. Whitening ny nify mety hahatonga ny uneven loko famelabelarana raha ny satro-boninahitra mety ho hita rehefa mitsiky.
Aza nify-staining zava-pisotro, raha tianao izy ireo mba ho fotsy nify. Misy ohatra ny zava-pisotro ahitana ireo kafe, kafe sy ny dite nentim-paharazana. Raha te-tsy staining no misotro ianareo izany, Diniho sipping rano eo sips ny zava-pisotro mba hampihenana staining.
Aza Whitening ny nify, raha ny fitsaboana no mahatonga fanaintainana na ny fahatsapana. Whitening vokatra dia afaka mampitombo ny fahatsapana indraindray ka hahatonga mamaivay. Raha izany no mitranga, intsony ny fampiasana ny whitener avy hatrany, ary miresaka amin'ny mpitsabo nify momba ny hafa izay mety ho vokatra mety ho mora nify.
SOSO-KEVITRA! Hividy zava-pisotro izay mahatonga stains amin'ny rano. Rehefa manana rano rehefa maizina rano (kafe, dite, Pop, sns.
Mihinàna ny paoma mba haingana hanazava ny nify, na manana ny endriky ny fotsy nify. Manopy ny sakafo sy ny legioma manana Marokoroko sy toetra izay afaka manampy anao manadio ny nify nefa tsy voatery be fahasimbana eo amin'ny karazana verinia.
Anontanio ny mpitsabo nify ho gel izay azo ampiasaina ao an-tokantrano mba hanampy mahafotsy ny nify. Io fomba Tafiditra ny fanomanana ny mpitondratenin'ny izay feno gel. Ianao hanao izany ho fe-potoana sasany alina tsirairay nandritra ny roa na telo herinandro. Mety hahazo ny nify toy valo matoatoa fotsy amin'ny alalan'ny fampiasana io fomba.
SOSO-KEVITRA! Mpitsabo nify fitsidihana tena ilaina ny mahazo fotsy nify. Fanorenana voalahatra cleanings eo amin'ny fiainanao no ilaina mba fotsy nify.
Aza mampiasa misy Whitening fitsaboana raha toa tsapanao fahatsapana eo amin'ny nify ho mora mahatsapa. Tokony hevitra ny mpitsabo nify ny toro-hevitra satria afaka ho tena niteraka fahasimbana ny nify. Tokony hiteny amin'ny mpitsabo nify vao hahalala izay safidy no tsara indrindra ho anao raha ny Whitening-nify.
Miborosy nify isan'andro no fomba tsara indrindra mba hihazonana azy ireo ho salama, ary hiaro azy ireo hamely lavadavaka, ary unsightly staining. Nampiasa ny Whitening lehibe toothpaste fomba hanatsarana ny endriky ny nify. Maro ireo ny safidy, toy izany koa ny sasany fikarohana, ary dia hanampy anao hahita ny tsara indrindra ho an'ny Whitening toothpaste ny zavatra ilaina.
SOSO-KEVITRA! Ianao ho sahy ny tsikinao raha matoky kokoa momba ny fofonaina. Licking ny drofia (sasao ny tanana aloha!) afaka milaza aminareo raha fofonaiko, na ratsy na tsy.
Miborosy nify tsy tapaka raha manana smile.Food lehibe sy zava-pisotro dia afaka manorina eo amin'ny nify sy discolor na hampietreny azy ireo rehefa afaka fotoana. Tsy ho liana amin'ny discoloration ny nify raha tapaka tsy tapaka foana nify-fanilihana fahazarana.
Tadidio fa zava-dehibe ny flossing ny nify tsy tapaka. Flossing mahazo ny potipoti-javatra ao an-nify ary miady takelaka, izay Lasa mavomavo. Tokony hanome ny nify ny flossing taorian'ny sakafo rehetra; floss dia portable ampy fa afaka mitondra izany taminareo, fony ianao mihinana an-trano. Alohan'ny handeha hatory amin'ny alina, dia tena zava-dehibe ny floss ny nify mba afaka manala ny nasty bakteria izay mety ho hita eo am-bavanao.
SOSO-KEVITRA! Aza kafe, dite, colas sy ny maizina miloko zava-pisotro mba hitandrina ny nify ny whitest. Tsirairay ny zava-pisotro ireo dia hahatonga ny nify ho discolored.
Misotroa ihany no zava-pisotro mazava tsara mandritra ny andro vitsivitsy taorian'ny no natao ny nify whitened.
Nanapaka teo amin'ny zava-pisotro, toy ny sirahazo Pop na divay, dia hanampy anao hanana fotsy nify. Satria sirahazo sy ny divay dia afaka voalotoko ny nify, dia afaka miaro ny fotsy tsiky ny misotro kely kokoa ny roa. Raha tsy maintsy manana ireo, anefa, miborosy nify raha vao araka izay azo atao rehefa mandevona azy. Izany no hanome azy fotoana kely mba hampietreny ny nify ratsy loatra.
SOSO-KEVITRA! Mba hahazoana ny nify fotsy, dia afaka mampiasa ny hodi-kazo avy amin'ny hazo Walnut. Namafa izany amin'ny nify tsara manadio azy ireo ary mahatonga azy ireo fotsy.
Izany dia fomba izay vidiny kokoa, fa manome anareo haingana vokatra.
Lanin'ny lehibe kokoa dairy be ny sakafo. Zavatra vita amin'ny ronono dia manana mineraly, toy ny kalsioma, izay hitandrina ny nify salama mitady. Ny karazana verinia ny nify dia ho mafy orina sy tsy mora discoloration. Rehefa tafiditra ireo karazana sakafo ao an-sakafo no manome ny tenanao ho fotsy tsiky.
SOSO-KEVITRA! Miborosy nify amin'ny fanaova soda sy peroxyde apetaho ny mahafotsy azy ireo. Samy sakafo dia matetika ampiasaina ao amin'ny Whitening toothpastes, ary ny ankamaroan'ny olona hiaro azy ao an-tranony.
Mihinana legioma sy ny voankazo izay mihasimba fibrous fa mety hanao toy ny voajanahary scrubber ho an'ny nify. Vitsivitsy ohatra ny sakafo mba handinika ahitana paoma, paoma, kokombra sy ny karaoty. Ampiasao ny nify rehetra mba mitsako ny sakafo manopy mba hahazoana ny vokatra ambony indrindra.
Aza mifoka sigara, na sigara raha toa ka afaka manampy azy. Ireo roa no fantatra ny mahatonga ny discoloration-nify. Miala ny fifohana sigara dia hanampy fisorohana ny yellowing-nify. Misy fanafody izay afaka tsara manampy anao hiala amin'ny sigara ianao, raha mandeha any amin'ny dokotera. Tsy maintsy manana ny tsara torohevitra sy fanohanana.
Ny ankamaroan'ny olona dia maniry izy ireo nanana nify fotsy. Ny olana dia ny ankamaroan'ny olona tsy mino fa afaka mahafotsy ny nify, ka na oviana na oviana na dia miezaka. Taorian'ny ny toro-hevitra sy tetika avy amin'ity lahatsoratra ity no hanome anareo fotsy nify tsara amin'ny tena kely ny fotoana.
Sokajy: Home Miorina amin'ny mahafotsy Nify Tags: fotsy nify, Whitening Teeth Tips, Whitening Teeth Tips Afaka Andramo Out ankehitriny!